Maxamed Cali Kalaay oo lagu aasay magaalada Louisville (Daawo Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Maxamed Cali Kalaay oo lagu aasay magaalada Louisville (Daawo Sawirro)
Marxuum Maxamed Cali Kalaay oo todobaadkii hore geeriyooday ayaa lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Louisville, iyadoo hab maamuus heer sare ah loo sameeyay aaskiisa.
Kumanaan dadweyne ayaa ka qeybgalay aaskiisa, waxaana dadka ka qeyb galay isugu jireen Madax, aktaro caan ah, iyo dad kale oo magac ku leh Mareykanka.
Munaasabadda aaska ayaa ka dhacday garoon lagu ciyaaro ee magaalada Lousville ayaa waxaa buuxiyay dadweyne fara badan oo aad u jeclaa Maxamed Cali Kalaay.
Ka hor inta ana garoonka la geyn naxashkii lagu siday meydkiisa ayaa waxaa lagu wareejiyay waddooyinka magaalada Louisvilla, iyadoo naxashka la huriyay maro ay ku dul-qornaayeen towxiidka
Khudbado ayaa laga jeediyay munaasabada ka dhacday garoonka, waxaana dadkii ka hadlay ka mid ahaa Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa sheegay in Maxamed Cali Kalaay uu Mareykanka meel weyn uu uga yaallo, isagoo soo hadal qaada kaftankii iyo fur furnaantii uu caanka ku ahaa
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa ka qeyb galay salaadii Janaasada ee loo sameeyay khamiistii la soo dhaafay, balse kama aanu qeyb gelin aaskii xalay loo sameeyay.
Allaha u naxariistee Maxamed Cali Kalaay ayaa waxaa iilka dhigay qoyskiisa iyo asxaabtiisa, sida uu horay uga dar-daarmay.
Shaqooyin ka bannaan Bankiga Salaam